Mee kaadiboodu iji dozie eserese | Crafts Na
Mee kaadiboodu icho mma eserese
Taa, anyị ga-agba mbọ ime ọrụ nke nkà nke mejupụtara ochicho mma nke osisi okpokolo agba mara mma nke ukwuu na nke nwere ike na-emegharị ka otu uto Iji mezuo nke a, ị chọrọ mpempe akwụkwọ nke kaadiboodu isi awọ okpokolo agba okpokoro 1,5 mm, 50 × 70, mpempe akwụkwọ nke 100g kaadiboodu ntụ ntụ nke 50 × 70, mpempe akwụkwọ nke 50 × 70 mpempe akwụkwọ nwere akara achọrọ, gluu, gburugburu agba ahịhịa n .18 , mma na mkpa, metal njide.
Bee kịdọnetị katọn abụọ 13 × 11,5 cm., N'ime rectangle dị n'ime nke 9 × 7,5 cm, yabụ anyị nwere etiti 2 cm n'akụkụ ọ bụla.
Bee osisi kaadiboodu abuo 13 x 1,5 cm na 8,5 x 1,5 cm ogologo. Ghichaa ogologo oge ogologo nke etiti ahụ na nke ọzọ na otu n’ime akụkụ abụọ dị mkpụmkpụ. Iji kee oké ịbanye foto na eku.
Bee ihe ntanetị 17 × 15,5 cm abụọ site na mpempe akwụkwọ (nye 2 cm maka akụkụ ọ bụla). Ghichaa akwụkwọ ahụ na kaadiboodu abụghị ụzọ, wee jirizie mpempe akwụkwọ na-edozi ya. Debe okpokolo agba na akuku ozo nke akwukwo a, ejirila gluu kpuchie ya. Dọrọ ọkụ X-ebipụ n'etiti ma bee n'ime 5 × 3,5 cm rektangulu, wepụ ihe kaadị mgbakwunye Kpoo akwa a kpụrụ ma tinye ha na kaadiboodu.
Bee ihe ntanetị nke akwụkwọ 12 × 10,5 cm ma kpoo ya na kaadị kaadị e nwere ụzọ dị n'ime uwe ahụ. Ftgbanwee azụ na pedestal. Kpoo ogologo rektangulu site na kaadiboodu nke 10 x 4. N'ihe dị elu nke 8 cm pịrị ọnụ na mma, site n'enyemaka nke ahịrị. Ma, kpachara anya ka ị ghara igbari kaadị abụọ.
Bee akwụkwọ mpịachi 12 × 7 cm, debe gluu iji rapara na kaadiboodu dị mkpa, na akụkụ a na-edeghị. Bechapụ akụkụ anọ ya ma mee mpempe abụọ na akara mbepụ. N'ogige akwụkwọ ahụ. Nyochaa ihe ịrịba ama nke mbepụ na ihe onyonyo ahụ ka ọ na-enye nrụgide ụfọdụ. Bee akwukwo mpempe akwụkwọ maka azụ nke nkwado na 9 x 3 cm.
Ugbu a ị nwere ike hazie etiti. Incollatene akụkụ atọ na ọkpụrụkpụ, na-ezu ike na akụkụ anọ akụkụ. Ghichaa sentimita abụọ nke pedestal (otu karịa akara mbepụ) n'azụ akụkụ akụkụ anọ. Debe ihe niile n’okpuru ikpo akwụkwọ buru ibu ma ọ dịkarịa ala awa iri na abụọ iji daba nke ọma n’etiti akụkụ dị iche iche gbakọtara.
Ozi ndị ọzọ - Icho mma okpokolo agba
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Mee kaadiboodu icho mma eserese
Omenala ndọta maka ngwa nju oyi gị
Cochọ mma oriọna na ọrụ nsị